राती १० बजेपछि बाजा बजाउन रोक « रिपोर्टर्स नेपाल
राती १० बजेपछि बाजा बजाउन रोक
प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०७८, मंगलबार
वीरगञ्ज, ७ मंसिर । वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र राति १० बजेपछि हुने गरेको ध्वनि प्रदूषण न्यून गर्ने उद्देश्यले चर्को आवाजमा डिजे, बाजा र ब्यान्डबाजा बजाउनमा रोक लगाइएको छ । विवाह, व्रतबन्धसहित विभिन्न मेला महोत्सवको बहानामा अश्लील गीतसङ्गीत एवम् सडकमा आर्केस्ट्राको नृत्यमा रोक लगाइएको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिए । सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत समाजमा हुन सक्ने विकृति–विसङ्गति तथा अश्लील गीतसङ्गीत एवम् सडकमा सो नृत्यमा रोक लगाइएको हो ।
यसैगरी, घण्टाघर नजिकैका धर्मशाला, पार्टी प्यालेस एवम् होेटल बिपीपार्क, माईस्थान आदर्शनगर क्षेत्रका पुरानो बसपार्क र अलखिया मठ, छपकैया विर्ता क्षेत्रकाले बिर्ताबजार एवम् इदगाहा क्षेत्रको खाली ठाउँमा पार्किङ गर्नुपर्ने योजना अघि बढाइएको हो ।
यसैगरी, वीरगञ्जमा सवारी पार्किङ व्यवस्थापन तथा दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धमा धर्मशाला, होटेल, पार्टीप्यालेसले नै सुरक्षा गार्ड राख्ने र सवारीसाधन पार्किङमा व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार हुनुपर्ने गर्ने योजना बनाइएको ग्रिनसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र आदर्शनगरका अध्यक्ष जयप्रकाश खेतानले जानकारी दिए । रासस
ओलीलाई पछि पार्दै मुकुन्दे चर्चामा
काठमाडौं, ११ मंसिर । यतिबेला नेकपा एमालेको महाधिवेशन चितवनमा चलिरहेको छ । सबैको ध्यान केपी
मुकुन्देले विवाह पक्का गरेका इन्दिरा को हुन् ?
काठमाडौं, ११ मंसिर । सामाजिक सञ्जालमा सर्वाधिक चर्चित मुकुन्द घिमिरेले विवाह पक्का गरेका छन् ।
मुकुन्देको इन्दिरा संग्रौलासँग इन्गेजमेन्ट
काठमाडौं, ११ मंसिर । सामाजिक सञ्जालका चर्चित पात्र मुकुन्द घिमिरेको इन्गेजमेन्ट भएको छ । उनको
चिनियाँ कामदार रोकिँदा नौं तले दरबार पुनःनिर्माण अवरुद्ध
काठमाडौं, ८ मंसिर । मित्रराष्ट्र चीन सरकारको सहयोगमा पुनःनिर्माण भइरहेको विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका
खेताला भन्दा थ्रेसर सस्तो, आधुनिकिकरणको बाटोमा किसान
लमजुङ, ८ मंसिर । गाउँमा खेताला पाउन छाडेपछि यहाँका किसान आधुनिक थ्रेसर मेसिनतर्फ आकर्षित हुन
एम्बुस बन्दै सडकका खाल्टाखुल्टी, सम्बन्धित निकायको गएन ध्यान
पर्सा, ७ मंसिर । वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रको मुख्य मुख्य सडकमा खाल्टो परेपछि सार्वसाधारण जोखिममा यात्रा
फाइजरका नेपाल प्रबन्धक भट्टराईको डेंगुले निधन
काठमाडौं, ७ मंसिर । अमेरिकाको भ्याक्सिन तथा औषधी उत्पादक कम्पनी फाइजरको नेपाल हेर्ने प्रबन्धक पदम
विजोग कारागार सुधारगृह कहिले बन्ने ?
बलेवा, ६ मङ्सिरः पुरानो भवनमा पानी चुहिन्छ । हिउँदमा भुइँको चिसो र वर्षाको समयमा आकाशको
भीम रावल ब्याक होलान् ?
काठमाडौं, १२ मंसिर । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सर्वसम्मतबाट पुनः अध्यक्ष बन्ने प्रयासमा